Iikholeji ze-SAP zokuQeqesha ezintle kakhulu oza kuziva
Iikholeji zoQeqesho ezingamangalisa ngeSAP ERP oza kuziva
I-SAP yindawo ekujoliswe ngayo kwimibutho yokuhlaziywa kwamandla namhlanje. Uvulindlela weemarike kwiprogram enkulu yesicelo sezoshishino, ukuqeqeshwa kwe-SAP kunceda imibutho inxamnye nempembelelo enobungozi yemvelo eninzi, ukuvelisa iingcango ezivulekileyo zokuqhubela phambili nokuphuhliswa, kwaye zihlala phambi kwenkcaso.
Nika abasebenzi bakho ulwazi kunye neempawu ezifunekayo zokwandisa amandla amalungiselelo akho e-SAP - kunye nekhosi yethu yokuqeqesha, iiprojekthi zokufundisa kunye neziqinisekiso ze-SAP. Yenza ilungiselelo olupheleleyo loqeqesho, udibane nabaxhasi abaphelileyo ngokuphila, kwiwebhu, kunye nezifundo eziphathekayo-kwaye ekugqibeleni ukuxhasa iinkqubo kunye nekhono lokuvuselela umbutho wakho. mhlawumbi i-SAP Training Course kunye neZatifikethi eziMangalisa kakhulu zichazwe phantsi:
I-SAP SD (Ukuthengisa & Ukusabalalisa) Uqeqesho nokuQinisekisa
Iiprojekti zeProjekthi ze-SAP (PS) Uqeqesho nokuQinisekisa
I-SAP Isiseko soQeqesho nokuQinisekisa
ISAP Basic Basic FICO UkuQeqesha nokuQinisekisa
I-SAP 01 Isicelo sokuQeqesha noQeqesho
I-SAP - Ukuqeqeshwa kwe-PM kunye neZatifikethi
I-SAP-MM Training & Certification
I-SAP - I-HCM Ukuqeqesha kunye neZatifikethi
I-SAP - HANA Training & Certification
I-SAP - Ngaphambi kweFICO UkuQeqesha nokuQinisekisa
I-SAP - ABAP Training & Certification
I-SAP zoQeqesho zoQeqesho kunye neZatifikethi
1. ISAP Associated Application Associate - Sales and Distribution, ERP 6.0 EhP6 Training
2. ISAP Inkqubo yoQhagamshelwano lweZicelo eziQinisekisiweyo kunye neSAP ERP 6.0 EHP4
4. Uqeqesho lweSAP oluyisiseko lweFICO
5. I-SAP 01 Isicelo soQeqesho
6. I-SAP - PM - Iinkqubo zoShishino kwiCandelo loQeqesho loPhuhliso
7. SAP MM - SAP Uqeqesho loLawulo loLawulo
8. I-SAP HCM-SAP yoQeqesho loPhuhliso lwaBantu
10. I-SAP - Ngaphambi koqeqesho lwe-FICO
11. Uqeqesho lwe-SAP - ABAP
I-SAP ERP Intengiso kunye nokuSasazwa kunika yonke impendulo yokuphendula impendulo ngobume obubanzi bamashishini. Inxalenye yenkqubo yemodyuli eyomeleza abathengi bakho, ukuqala ngokubhaliweyo, ukucela isicelo kunye nomgama ekujoliseni umthengi. Ihlanganiswe ngokuqinileyo kunye ne-MM kunye ne-PP. Ivumela imibutho ukuba ifake uluhlu lwabo abathengi abaxhamli, qwa lasela izicelo ezivulekileyo kunye nokuqikelelwa njalo njalo.
I-"Deals and Distribution, ERP 6.0 EhP6" iimviwo zihlola ukuba umfaki-sicelo unomfundi kwintsimi yoLawulo lweMali yokuThengiswa kweeNgxelo. Le mfundiso ibonisa ukuba umncintiswano unokuqonda okuyisiseko ngaphakathi kwiprofayili yengcali, kwaye unokuqhuba le nkqubo ngokukodwa kwiiprojekthi.
Ukuqinisekisa ukuphumelela, uqeqesho lwe-SAP luchaza ukujoyina iikholeji zoqeqesho kunye nokubandakanyeka kwezandla ukucwangcisa ukuhlolwa kweemviwo zakho njengoko imibuzo iya kuhlola amandla akho okusebenzisa ulwazi olufumene ekuqeqesheni.
Awuvumelekanga ukusebenzisa nayiphi na into yokubhaliweyo phakathi kokuvavanya isitifiketi (akukho nangoovimba bokungena kwi-intanethi okanye nayiphi na isakhelo se-SAP).
Olu vavanyo lwezatifikethi luqinisekisa ubungqina obubonakalayo kunye nolwazi olubalulekileyo kwi-SAP ERP Project Systems. Kubonisa ukuba umncintiswano unokuqonda ngokuqhelekileyo ngokubanzi kwiprofayili yesazi, kwaye unokufaka isicelo sale njongo kuzo zonke iinjongo kunye neenjongo phantsi kolawulo lomcebisi. Oku kuvunyelwa kukunyuka kwiinkalo zokufunda eziphambili ezithatyathwe ngamava angenawo achaziweyo kunye neengqondo ezungeze apho. Kuxhomekeke kwimfundo eqokelelwa kwizifundo eziphambili kunye nokucocwa kwintsebenziswano yekhomishini ye-commonsense.
Ukuqinisekisa ukuphumelela, uqeqesho lwe-SAP luchaza izifundo zokudibanisa kunye nokuqonda ngezandla ukulungiselela ukuhlolwa kweemviwo zakho njengoko imibuzo iya kuvivinya amandla akho okusebenzisa ulwazi olufumene uqeqesho.
Ilungiselelo leeprojekthi ze-middleware kunye nezixhobo ezinika isiseko esifihliweyo esixhobisa izicelo ukuba zingabandakanyeki kwiindlela zokusebenza. Isiseko se-SAP sibandakanya i-RDBMS, i-GUI, kunye ne-engineering server. Edlulileyo inxalenye yesikhombisi-siseko seSiseko, idibanisa igalelo elinjalo njengengcaciso yelizwi kunye nenkxaso yomthengi kunye nenkqubo yokwakha. Ukuqulunqwa yinkqubo yesakhelo seSAP. Yincinci ye-middleware edibanisa isicelo kunye nedatha kunye nesakhelo sokusebenza. I-Premise ininzi ixhomekeke kwi-interface ye-GUI kwi-SAP.
Ukulungiswa kakuhle ku-SAP FICO Ukuqeqeshwa nguTitshala ophumeleleyo kwizandla ezicebile ngakumbi ekufundeni ulwazi. Ngeyure nganye yedilesi kukho iiyure ezine zokusebenza. Iimali (FI) kunye nokuLawula (CO).
I-FI ibandakanyeka amatyala-mboleko, amatyala amatyala kunye nerekhodi jikelele, ngokufanayo neendlela zokuthumela i-akhawunti, iincwadi ezikufutshane, ukufumana iingcaciso zemali kunye neengxelo ze-asethi. Ukuxhaswa kweeMali kunye nokuLawula kufundiswa njengemfundo enye kwi-Learn SAP
Umqeqeshi wosuku lwe-3 uqhuba uqeqesho luqala ngokucacisa amagama asetyenziswe yi-SAP - kunye namanqatha kunye neebholithi. Inika ukuhlaziywa kwamalungiselelo oshishino lwe-SAP ngelixa lwakhula ukufundiswa kwezinto ze-SAP eziyimfuneko ekuncedeni kwizifundo ezininzi ze-SAP ze-SAP. ISAP 01 ibonisa iingcamango ezibalulekileyo, amandla kunye neenzuzo ze-SAP NetWeaver, i-SAP ERP, iSAP Business Suite, kunye ne-SAP Amalungiselelo okuBhishini, ukubanceda iqela ekuhlunguleni nasekuhleleni ukusetyenziswa kwe-SAP ebalulekileyo.
Ikholeji yoqeqesho lwe-SAP ifaka izinto ezimbalwa ze-pragmatic esebenzisa izigqeba ze-SAP ERP (i-ECC6.0, BW). Kwakhona kubonisa ezinye iindawo.
Kuya kuba yinto efanelekileyo ukuba uqaphele ukuba inkalo yokongezelela ithatha izinto ze-ERP Release R / 3 4.6C kunye ne-SAP R / 3 ishishini ekucingeni.
Ukugcinwa kwezityalo ezifanelekileyo kubaluleke kakhulu kumgangatho wombutho wokuphucula nokudibanisa iifom zayo zokudala. Imibutho esebenzisa isakhelo se-R / 3 ye-SAP, ukusetyenziswa okunyanzelisayo kunye nokusetyenziswa kweNxalenye yokuTyala kweeNdalo (PM) kuthetha nenkqubo eneenzuzo ezibonakalayo ezibonakalayo. Olu qeqesho lwe-PM lunikeza isingeniso esingenakuqondakala kule nxalenye encinane kodwa esomeleleyo kwaye inikezela ngokugqithiseleyo phantsi kwencwadana yomhlaba yokuqhuba i-PM.
Ukuqala ngokubhalwa kweefom zoshishino eziphambili eziyimfuneko yenkxaso ye-PM, le Nkqubo ye-PM iya phambili ukulungiselela zonke iindawo ezibalulekileyo zokuxhasa nokulungiselela kwi-R / 3. Ukuqwalaselwa ngokukodwa kunikwa ukubandakanya inkxaso yenkxaso kwinkqubo yomsebenzi eqhelekileyo yombutho.
Le khosi yokuqeqesha i-SAP yinto ebalulekileyo kwizifundo zokulondoloza izityalo eziphambili ezihambayo: PLM305, PLM310, PLM315, PLM318, kunye ne-PLM320
SAP MM Module ihlanganiswe ngokupheleleyo kunye nee modyuli ezahlukeneyo kwisakhelo se-SAP R / 3, umzekelo, iiMali (FI), ukuLawula (CO), ukuThengiswa kunye nokuSasazwa (SD) nabanye. Ilula zonke iiphathi zolawulo lwezinto ze-SAP - izixhobo zokulawula, ukuhlela nokulawula, ukuthenga, ukufumana iimveliso, ukuphathwa kwempahla, kunye nesitifiketi sokufumana.
Nika amandla, ungene ngaphakathi, kwaye ukwakheni ikhono lakho - kunye neprogram yolawulo lwabasebenzi (HCM) oluvela kwi-SAP ImpumeleloFactors. Amalungiselelo ethu okulawulwa kwee-asethi esisefu ephakamileyo emafu anqwenela iimfuno zemisebenzi emininzi, ehlabathini jikelele kunye nokungalindelekanga. Sebenzisa izixhobo zentsebenziswano zokuhamba, ukubhuka kwabasebenzi, imali, kunye nesibhakabhaka ngumda ukusuka apho. Okubaluleke ngakumbi, khuthaza inkcubeko yokufunda okungapheliyo kunye nokuphuculwa kweengcali zoshishino olungcono.
I-SAP HANA yinto yokuguquka, isigaba sokuhlala ngokuhlaziya kunye nezicelo. Nangona ukuphucula i-IT stack, inika izixhobo ezinokwazi ezifana: ukulungiselela ukukhawuleza, ukukwazi ukuphatha ulwazi oluninzi, amandla okukwazi kunye nokukwazi ukumbulula imiba.
I-SAP HANA inikeza isigaba ukuvelisa elinye ixesha lamalungiselelo - ukusekwa okusebenzayo ukuhambisa umhlaba ukuphazamiseka kwentuthuko ngaphandle kokuphazamiseka.
I-SAP Hana ikulungele ukuqhuba ukuhlaziywa okuqhubekayo nokudala nokuthumela izicelo eziqhubekayo. Ngokukhawuleza kunokuba siqalise ukuqokelela inani elininzi lolwazi ngeenjongo zokubhenca, iinjineli zaqaphela ukuba ukuhambisa ulwazi kwi-CPU, ngokukhawuleza, kuya kuba vavanyo. Nangona i-Hard Disk Drives ishesha ngokukhawuleza kodwa ngexesha elifanayo alikhawulezi ngokukhawuleza. Okwangoku kunye ne-SAP HANA ingxelo edla ngokukhawuleza malunga neeyure ze-24 ukuvelisa nge-drive yangokujikeleza kanzima ayithathi mzuzu.
Ukulungiswa kakuhle ku-SAP FICO Ukuqeqeshwa ngumfundisi ophumeleleyo ukufumana izandla ezithe xaxa ekufundeni ulwazi. Ngeyure nganye yedilesi kukho iiyure ezine zokusebenza. I-module ye-SAP ye-FICO ifaka i-2 izigaba eziphawulekayo zokunceda kulindeleke ukuba zilandele iirekhodi ezinxulumene nemali zentlangano-i-Financial (FI) kunye ne-Controlling (CO).
I-FI ibandakanya amatyala-mboleko, amatyala amatyala kunye nerekhodi jikelele, ngokunjalo nezindlela zokuthumela i-akhawunti, iincwadi ezikufutshane, ukufumana iinkcukacha ezichanekileyo zemali kunye neengxelo ze-asethi.
I-Advanced Business Application Programming (I-ABAP) yintetho yesiphakamiso sokwenza izicelo ze-SAP (iinkqubo, isicelo kunye neMikhiqizo) isakhelo se-R / 3, isiseko seseshishini sesicelo esele senziwa ngokubanzi. I-ABAP ibhikisha kule nkqubo.
Iinkcazelo zolwazi (imethadatha) zenziwe kwaye zijongene ne-ABAP Dictionary. I-ABAP Dictionary ivumela umfanekiso ogqithisileyo wenani elikhulu leenkcukacha ezisetyenzisiweyo njengenxalenye yesakhelo ngaphandle kokuhlengahlengiswa. Idatha entsha okanye eguqulwayo ke ifikeleleke kuzo zonke izikhokelo zecandelo. Oku kuqinisekisa ukuhlonipha ulwazi, ukugcinwa kolwazi kunye nokukhuselwa kolwazi.
Iidable zibonakaliswe kwi-ABAP Dictionary ngokuzimeleyo kwedatha. Itafile eneesakhiwo esifanayo senziwa kule nkcazo inkcazo kwi-database efihliweyo.
Inkcazo yetafile kwi-ABAP Dictionary iqulethe iindawo ezilandelayo:
Amacandelo etafile afana namagama esimo kunye nolwazi lwimihlaba equlethwe kwitafile.
Izitshixo ezikude zibonisa ukudibanisa phakathi kweetafile.
Izicwangciso ezizodwa zilawula indlela itafile kufuneka yenziwe ngayo kwiziko ledatha.
Ziziphi i Modules zeSAP? Uludwe lwee-modules ze-SAP ERP